မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: ဂျပန် ငလျင် အခြေအနေ။ ယနေ့တနင်္ဂနွေ နေ့ နောက်ဆုံးသတင်းအရ သေဆုံးသူ ၁၇၀၀ ကျော်သွားပါပြီ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ဂျပန် ငလျင် အခြေအနေ။ ယနေ့တနင်္ဂနွေ နေ့ နောက်ဆုံးသတင်းအရ သေဆုံးသူ ၁၇၀၀ ကျော်သွားပါပြီ
ဂျပန်ဆူနာမီ သေဆုံးသူ ၁ ထောင်နီးပါးရှိပြီ
သောကြာ, 11 မတ် 2011
ဂျပန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဟွန်ရှူး (Honshu) ကျွန်းမှာ သောကြာနေ့က ပြင်းအားအဆင့် ၈.၉ ရှိတဲ့ ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် အခုဆိုရင် သေဆုံးသူ ၁,၀၀၀ လောက်ရှိနေပြီလို့ ဂျပန်သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဆင့်ကဲလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ဒဏ် ခံရတဲ့အပြင် နောက်ဆက်တွဲ ဆူနာမီရေလှိုင်းတွေရဲ့ဒဏ်ကိုပါ ခံရတာမို့ ထိခိုက်သေဆုံးမှု များပြားသလို ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တွေ့နေရပါတယ်။
သောကြာနေ့ နေ့လည်ပိုင်း ဟွန်ရှူးအရှေ့မြောက်ဘက် ရေပြင်အောက်မှာ ဗဟိုပြုတဲ့ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် တိုကျိုမြို့တော်က အဆောက်အဦးတွေ တုန်ခါခဲ့သလို အရှေ့မြောက်ပိုင်း ကမ်းခြေတလျှောက် ပေ ၃၀ ကျော် လှိုင်းလုံးကြီးတွေ ရိုက်ခတ်တဲ့ဒဏ်ကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဂျပန်ငလျင် ရိုတ်ခတ်မှုဟာ ရာစုနှစ်တခုကျော် ကာလအတွင်း ကမ္ဘာ့ ပဉ္စမမြောက် ငလျင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဖူကူရှီးမား (Fukushima) မြို့မှာရှိတဲ့ နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်ပေါင်းဖိုက အအေးပေးတဲ့စက် ပျက်သွားတာမို့ ဓါတ်ပေါင်းဖိုထဲမှာ ဖိအားတွေများလာသလို ပတ်ဝန်းကျင်လေထုထဲ အနုမြူဓါတ်ရောင်ခြည် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ အဆ ၁,၀၀၀ တိုးလာတာတွေ့ရတယ်လို့ ဓါတ်ပေါင်းဖိုတာဝန်ခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဖူကူရှီးမား ဓါတ်ပေါင်းဖို အနီးဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေကို စက်ရုံကနေ ၆ မိုင်ကျော်ဝေးတဲ့ နေရာကို ရွှေ့ပြောင်းကြဖို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် နာအိုးတိုးခမ် (Naoto Kan) က အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ငလျင်ဗဟိုချက်နဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဆန်ဒေး (Sendai) မြို့တ၀ိုက်က လယ်ယာမြေတွေမှာတော့ ရွှံ့ရည်တွေနဲ့အတူ အမိုက်သရိုက်တွေ ဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ မော်တော်ကားတွေ၊ အဆောက်အဦးတွေပါ တက်လာတဲ့ရေနဲ့အတူ မျောပါကုန်ပြီး သေဆူံးသူ ၂၀၀ ကနေ ၃၀၀ အထိ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
ဂျပန်ဆူနာမီနှင့် တိုကျိုရှိ မြန်မာများ
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၁၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၃၂ မိနစ်
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့၏ အရှေ့ဘက် ၃၇၃ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုပြု၍ သောကြာနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၄၆ မိနစ်တွင် ရစ်ချတ်စတာစကေး ၈.၉ ပြင်းအားရှိ ငလျင်ကြောင့် အမြင့် ၁ဝ မီတာခန့်ရှိ ဆူနာမီရေလှိုင်းကြီးများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး နှစ်ပေါင်း ၁၄ဝ အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံအတွက် အဆိုးဝါးဆုံးဟု ရိုက်တာ သတင်းဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
ဟာဝိုင်ရီကျွန်းရှိ ပစိဖိတ် ဆူနာမီသတိပေးဌာနက အဆိုပါ ဆူနာမီရေလှိုင်းများသည် ဂျပန်၊ ရုရှ၊ မာကပ်ကျွန်းများနှင့် မြောက်ပိုင်း မာရီယာနပ်စ်တို့တွင် ရိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်း သတိပေးထားပြီး၊ သတိထားစောင့်ကြည့်ရမည့် နိုင်ငံများတွင် ဂူအမ်ကျွန်း၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီနှင့် အမေရိကန် ဟာဝိုင်အီကျွန်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။
နာရိတာ လေဆိပ်ကိုလည်း ပိတ်ထားရပြီး၊ ဖူကူရှီးမားတွင် အိမ်ခြေ ၄ သန်းခန့် မီးပျက်နေသည်။ အဓိက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသည့် စက်ရုံမှာ မီးလောင်ကျွမ်းလျက်ရှိပြီး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က ပြည်သူများကို တိုက်တွန်းထားသည်။
ဂျပန်စံတော်ချိန် ည ၉ နာရီ၊ တိုကျို အခြေအနေ
ဒေါက်တာမင်းညို( Burma Office Japan)
“ အခု ပြောနေရင်းနဲ့ နည်းနည်း ထပ်လှုပ်လာတယ်။ အပြင်မှာ အခုဆိုရင် လမ်းမမှာ လူတွေအပြည့်ပဲ။ ကားတွေလည်း တလက်မချင်း ရွေ့နေတာ တကယ်လို့ အကြီးအကျယ် ထပ်လှုပ်လို့ ပြေးမယ်ဆိုရင်တောင် ပြေးစရာမရှိဘူး။ တိုကျို ၁ဝ နေရာလောက်မှာ မီးတွေလောင်နေတယ်။ ငလျင်လှုပ်ပြီးရင် အခန်မသင့်ရင် ဂက်စ်အိုးတွေ ပေါက်တတ်တော့ အခု ကျနော်တို့ ရှီဘူမှာဆိုရင် ဂက်စ်အိုးတွေသိမ်းတဲ့နေရာပေါ့ အဲဒီမှာပေါက်ကွဲပြီး မီးလောင်နေတယ်။ ကျနော် ရောက်တာ အနှစ် ၃ဝ ရှိပြီ တခါမှ ဒီလောက်ပြင်းတဲ့ ငလျင်မျိုး တခါမှ မကြုံဘူးဖူး။ ကျနော်တို့ အဆောက်အဦးမှာ ရှိတဲ့သူတွေ ဘယ်သူမှပြန်လို့မရဘူး။ ရထား၊ ဘတ်စကားတွေပိတ်ထားလို့၊ Taxi လည်းရနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ဒီမှာပဲ တညလုံးနေရတော့မှာပဲ။ အသေအပျောက် စာရင်းတွေလည်း တိုးလာတယ်။ ၄ဝ ကျော်ပြီ”
"ကျနော်တို့ သိသလောက်တော့ မီယာဂီမှာက မြန်မာတွေ မရှိသလောက်ပါပဲ။ တကယ်လို့ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ၂ ရက်လောက်မှပဲ အခြေအနေ သိရမယ်။ မီယာဂီက တိုကျိုနဲ့နီးတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ၂ ခါ လှုပ်တယ်။ ကျနော်တို့ ထိုင်ကိုနေလို့မရဘူး။ စားပွဲခုံတွေနဲ့ ဝေးတဲ့ နေရာ ထွက်ရပ်နေရတယ်။ တရုံးလုံး ဘယ်သူမှ မပြန်ကြဘူး။ ထမင်းစားစရာတောင် မရှိမှာစိုးလို့ ၆ နာရီလောက်က စတိုးမှာ သွားဝယ်တာတောင် လူ ၁ဝဝ လောက် တန်းစီဝယ်နေရတယ်။ အခုလောက်ဆို ရှိမှာတောင် မဟုတ်တော့ဘူး။ အစိုးရကိုယ်တိုင်က မပြန်ပါနဲ့၊ ကိုယ်ရှိတဲ့ အလုပ်နေရာမှာပဲ နေပါလို့ ပြောနေတယ်။ ညဘက်တော့ ရုံးမှာပဲ ရှိတဲ့ စားပွဲးကုလားထိုင်နဲ့ပဲ အိပ်ကြရမှာပေါ့”
“ကျနော်တို့ တိုကျိုမြို့ပေါ်မှာ တော့ ကားလမ်းတွေ ပိတ်ကုန်ပြီ။ ရထားတွေလည်း ရပ်ကုန်ပြီ။ ကျနော်လည်း လမ်းမှာ ကိုးလိုးကန့်လန့်နဲ့ အိမ်ပြန်ဖို့ ကားလည်း မရှိ၊ တက္ကစီလည်း ငှားလို့ မရနဲ့ အလုပ်ကိုလည်း ဆက်သွားလို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်”
“အထိအခိုက်ကတော့ ဒီမှာ ဘာမှ ဒီလောက်မရှိသေးဘူး”
“ကျနော်တို့လိုမျိုး ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ အလုပ်သွား အလုပ်လာတွေတော့ တော်တော် ဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်။ ဒီမှာ မြန်မာတွေက ၆ ထောင်နဲ့ ၇ ထောင်ကြားမှာ ရှိတယ်”
“ကျနော်တို့လည်း အခု ဘက်စ်ကားတွေ ဂျန့်ဖြစ်နေတာ၊ မြေပေါ်၊ မြေအောက် ရထားလိုင်းတွေ ရပ်ထားတာနဲ့ လမ်းမှာပဲ ကားထဲမှာပိတ်မိနေတယ်။ အလုပ်ကို ဆက်သွားလို့မရသလို အိမ်ကိုပြန်ဘို့လည်း အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်”
“ဖုန်းလိုင်းတွေကလည်း ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဆက်သွယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ငလျင်လှုပ်လှုပ်ခြင်း ၂ နာရီ ၄ဝ လောက်မှာပဲ အိမ်ကိုပြန်ဆက်သွယ်တယ်မရဘူး။ အခု လမ်းကြောပိတ်မိနေတာ ၄ နာရီလောက်ရှိပြီ ထွက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ လမ်းပေါ်မှာတော့ ကားတွေပိတ်မိနေတာ အများကြီးပဲ။”
“ကျနော်တို့ ဒီတိုကျိုမြို့နဲ့ အနီးတဝိုက်က မြို့တွေက ဒီမှာပဲအလုပ်လာလုပ်ကြတာဆိုတော့ အခုလိုလိုင်းတွေပိတ်လိုက်တဲ့အခါ သူတို့လည်း ပြန်လို့၊ သွားလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။”
“ ကျနော်တို့ အလုပ်ဆိုင်မှာ ဖန်ခွက်တွေဘာတွေ အကုန်လုံး ကွဲကျကုန်တယ်။ ပန်းကန်တွေဘာတွေ ကွဲကျကုန်တယ်၊ ကျနော်က တိုကျိုမြို့ ရှီဘူယာမှာ အလုပ်လုပ်တာဗျ။ တချို့ဆိုင်တွေဆိုလည်း မဖွင့်တော့ဘူးပေါ့။ ဓာတ်လှေကားတို့ ဘာတို့ဆိုရင်လည်း ရပ်ထားလိုက်တယ် မသုံးတော့ဘူးလေ၊ အန္တရယ်ရှိမှာစိုးလို့။ လူတွေက သွားလိုက်လာလိုက်နဲ့ အပြင်မှာ ရှိတယ်။ ရထားတွေအကုန်လုံး ရပ်သွားပြီးတော့ တော်တော်နဲ့ ပြန်ပြေးဖို့ မလွယ်တော့ဘူးနဲ့ တူတယ်။ ဘာလို့ဆို သံလမ်းတွေ ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက် အချိန်ကြာဦးမယ်နဲ့ တူတယ်”
“ကျနော် ဒီဂျပန်ရောက်တာ အနှစ်၂ဝ လောက် ရှိပြီ။ ဒါလောက် ပြင်းတာ ပထမဆုံးပဲ”
“လိုင်းဖုန်းလောက်ပဲရတယ်။ ဟန်းဖုန်းတွေ တခုမှ သုံးမရတော့ဘူးခင်ဗျ။ ဟော … ဟော အခုပြောနေတုန်းမှာ ထပ်လှုပ်တယ်ဗျ၊ သိသိသာသာပဲ။ ကျနော်က ၉ ထပ်မှာဆိုတော့ သေးသေးလေးတွေကတော့ တောက်လျှောက် မပြတ်ဘူးခင်ဗျ”
ဧရာဝတီ Friday, 11 March 2011 19:28
ကမ္ဘာမြေ ပြင်းပြင်း တုန်ခါယမ်းလိုက်သောအခါ
Friday, 11 March 2011 11:26 မောက္ခ နိုင်ငံတကာသတင်း
ဒဏ္ဍာရီအရ ဂျပန်ကျွန်းစုများအောက်တွင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်ယမ်းယမ်း ဧရာမ ကြောင်ငါးကြီး တစ်ကောင် ရှိ သည်။ သူ့ဦးခေါင်းကို ကမ္ဘာမြေစောင့် ရှင်တို နတ်ဘုရား က နှမ်းဖတ် ကျောက်တုံးကြီးနဲ့ ဖိညှပ်ထားသည်။
သို့ပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံတော့ ရှင်တိုနတ်ဘုရားက သူ့ဖိထားတဲ့ ကျောက်တုံးကို ဖြုတ်ချတတ်သည်။ အဲဒီလို ကျောက်တုံးကြီး ပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါ ငါးကြီးက တကိုယ်လုံး လှုပ်ခါယမ်းလိုက်တော့ ကမ္ဘာမြေတစ်ခုလုံး သိမ့်သိမ့်တုန်ခါ ချောက်ခြားသွားကြရသည်။
မေလ ၁၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ကမ်းခြေနဲ့ ၁၅ မိုင်အကွာ ပြင်းအား ပမာဏ ၈.၉ ရှိ ငလျင်ကြီး တုန်လှုပ်ခဲ့သည်။ တဆက်ထဲ ဆုနာမီ ကြောက်မယ်ဖွယ် ဧရာမ ရေလှိုင်းကြီးများ လိုက်ပါလာသည်။ စက္ကန့်နဲ့အမျှ တလိမ့်လိမ့် တက်လာတဲ့ ရေလှိုင်းလုံးတွေက ကားတွေ၊ သင်္ဘောတွေ၊ အဆောက်အဦတွေကို အမှိုက်အစအနများသဖွယ် သိမ်းကျုံးသည်။ လက်ရှိ စာရင်းအရ လူ ၆၀ သေပြီး ၂၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရာသည်။ နာရီပိုင်းအတွင်း လူနေအိမ် ၃၀၀ ကျော် ပြိုဆင်း ရေမျောသွားသည်။ ရုရှားမှ တောင်အမေရိက အထိ ပစိဖိတ်ဒေသ ၅၈ နိုင်ငံအတွက် အရေးပေါ် သတိပေးထားရသည်။
ပြင်းအား ၈.၉ ပဏာမရှိ ထိတ်လန့်ဖွယ် ငလျင်ကြီးမျိုးမှာ ဂျပန်လို ငလျင်ကြောမိနေတဲ့ နိုင်ငံမှာတောင် အလွန် ဖြစ်ခဲသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဆုနာမီထက် သေဆုံးမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု အတိုင်းအတာများမလားဆိုတာ မခန့်နိုင်သေး။ နာရီပိုင်းအတွင်း ဖုန်းလိုင်းတွေ ပျက်ကုန်သည်။ လေကြောင်းတွေ ရပ်တံ့သွားသည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ မီယာဂီ၊ အိုင်ဝါတီ၊ ဖူကူရှီမာ ကမ်းခြေမြို့နေရာတွေ ရေမြုတ်သွားသည်။
ကလေးဘ၀ကတည်းက ဂျပန်တွေကို ငလျင်ဘေး သင်ကြားမှု သင်တန်းတွေ ပေးထားသည်။ သို့သော် ကမ္ဘာမြေ တကယ်တုန်ခါသွားတော့ ဦးတည်ရာမဲ့ ဖြစ်ကြရသည်။ ကျည်ဆန်ရထားတွေ ချက်ချင်း ရပ်ပစ်ရသည်။ နျူကလီယား ဓာတ်အားပေး စက်ရုံတွေ အလိုအလျောက် ပိတ်သွားသည်။ ဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေမှာ ရေဒီယို သတ္တိကြွများ ယိုစိမ့်မှုမရှိသေးကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ်က ကြေငြာပေမဲ့၊ တိုကျို ရေနံသန့်စင် စက်ရုံ မီးလောင်နေသည်။ ကျန် နေရာ ၅၀ တွင် မီးလောင်မှုများ ဖြစ်ပွားနေသည်။
ဆုနာမီလှိုင်း အဓိက ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ နေရာတွေမှာ အသက်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် စစ်တပ်တွေ လွှတ်ထားသည်။ အတိုက်အခံ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်ပါတီက အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဖို့ ကြေငြာလိုက်သည်။ အလုပ်သမားများ အိမ်ပြန်ဖို့ ခက်နေပြီး၊ ဧကရာဇ် ဘုရင် နန်းတော် လမ်းများတလျှောက်နှင့် အစိုးရ ရုံးဝန်းများအတွင်း ညနေချမ်းမှာ လူတွေ စုပြုံတိုးဝှေ့နေကြသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ် ၆.၈ ပမာဏရှိ ကိုဘေး ငလျှင်ကြောင့် ဂျပန်တွင် လူ ၆၄၀၀ သေဆုံးခဲ့သည်။ ဆုံးရှုံးမှုမှာ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံ ရှိခဲ့သည်။ ယခု ငလျင်ကြီးက ဘယ်လောက်ထိ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်စေမလဲ။ ဘယ်နိုင်ငံတွေ ဆုနာမီလှိုင်း ဆက်ရိုက်ခတ်ဦးမလဲ။
သို့ဖြစ်ရာ ပြည်ပရောက် မြန်မာများ အနေဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသမှ ရာသီဥတု သတင်းများကို မျက်ချေမပြတ်နားထောင်ခြင်း၊ အန္တရာယ် သက်ရောက်မှုရှိသည့် ဒေသများတွင် နေထိုင်ပါက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်ရန် ရိက္ခာများ၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ထားခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ထားကြပါရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
The Agency is urging people to be on the alert for the possible collapse of buildings and mudslides.
Saturday, March 12, 2011 00:56 +0900 (JST)
“Thousands of people were being evacuated around the two plants.
31 May 1970 Chimbote, Peru: 70,000 killed,
Reuters - 1 hour 34 minutes ago
Pressure was building in reactors of two plants at Tokyo Electric Power Co's Fukushima facility, located some 240 km north of Tokyo. At one of them, the Daiichi plant, pressure was set to released soon, which could result inaradiation leak, officials said.
Preparatory work for the releasing of the pressure was expected to take time, Kyodo reported. Radiation levels outside the main gate of the plant were eight times normal levels.
Japan informed the International Atomic Energy Agency that the quake and tsunami cut the supply of off-site power to the plant and diesel generators intended to provide back-up electricity to the cooling system.
The Union of Concerned Scientists,aU.S.-based nonprofit organisation, said this power failure resulted in one of the most serious conditions that can affectanuclear plant --astation blackout -- during which off-site power and on-site emergency alternating current power is lost.
Power supply systems that would provide emergency electricity for the plant were being put in place, the World Nuclear Association said, withasource in the organisation saying "the situation is improving."
A spokesman said that there were no concerns ofaleak for the remaining three reactors at the plant, which had been shut for planned maintenance.Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:36 AM